ငါ့မှာ frenulum အတိုရှိမရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 31/10/2021 10:08 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, စုံတွဲနှင့်လိင်
အမျိုးသားများ သို့မဟုတ် ဆယ်ကျော်သက်များစွာ တိုတောင်းသော frenulum ခံစားနေရသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြင်နိုင်မလားဆိုတာ သေချာမသိဘဲ။ တခြားသူတွေအတွက်တော့ သူတို့မှာ frenulum တိုတောင်းပြီး ယောက်ျားလေးတော်တော်များများ ရောက်လာတာကို သိရတာ ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ သံသယတွေနဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ အရွယ်မှာ တခြားအမျိုးသားတွေက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ သူတို့ရဲ့ပြဿနာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖုံးကွယ်ထားကြတယ်။
လက်ရှိအနေအထားပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်ကုသမှု။ ဤအခြေအနေအများစုတွင် ကလေးများသည် ငယ်ရွယ်ပြီး လိုအပ်မှသာ ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ခရင်မ်တစ်မျိုးမျိုး အရေပြားကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့ပါးလာအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားအဆင့်မြင့်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ခွဲစိတ်ကုသဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
1 ကျွန်ုပ်တွင် frenulum အတိုရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
2 တိုတောင်းသော frenulum သည် အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သနည်း။
3 ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာနိုင်လဲ။
4 တိုတောင်းသော frenulum အတွက်ကုသမှု
5 သူ့ရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်က ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တွင် frenulum အတိုရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ သိထားဖို့ပါပဲ။ တိုတောင်းသော frenulum ခံစားနေရလျှင် ဒါမှမဟုတ် တခြားအမျိုးအစားလား။ phimosis ကဲ့သို့သောပြဿနာ. လိင်တံပတ်ပတ်လည်ရှိ အရေပြားသည် အင်္ဂါစပ်၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာနှစ်ဖက်စလုံးကို ဂလက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ရန် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဆွဲဆန့်ရန်နှင့် ကျုံ့နိုင်စေရန် ကူညီပေးသည့် ခေါက်တစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်သည်။
ဤခေါက် သို့မဟုတ် frenulum တိုလွန်းသောအခါ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို မဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် စိုက်ထူတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ ကြုံရတတ်တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ frenulum သည် တိုသည် သို့မဟုတ် အလွန် elastic မဟုတ်ပါက၊ ဂလက်များကို လုံးလုံးလျားလျား ဆုတ်ခွာရန် ခွင့်မပြုဘဲ လိင်တံ စိုက်ထူလာသည့်အခါမှသာ မြင်နိုင်သည်။
တိုတောင်းသော frenulum သည် အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သနည်း။
အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ phimosis ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ. Phimosis သည် အမြှေးပါးရှိ အပေါက်သည် သေးငယ်လွန်းခြင်း၊ ကျဉ်းမြောင်းလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် မပျော့ပျောင်းလွန်းခြင်းတို့ကြောင့် ဂလက်များ ထွက်လာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အရေပြားကို ပြန်ဆွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိမှာမို့ စိုက်မထောင်နိုင်ပေမယ့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်သည် short frenulum နှင့်ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။
အခြားအကြောင်းရင်းများ မျိုးရိုးဇာတိဖြစ်နိုင်သည်။မွေးကတည်းက ဒီလို ကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတာပါ။ ဒါပေမယ့် တခြားအချိန်တွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ လိင်အင်္ဂါကူးစက်မှု frenulum တစ်ရှူးများ ထူလာနေသည့်နေရာ (ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် fibrosis)။
အချို့သော အမျိုးသားများသာမက ကလေးသူငယ်များ သို့မဟုတ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်ပါ ရှိဖူးသည်။ frenulum ၏မျက်ရည် ကုသနေစဉ်အတွင်း ဆိုးရွားစွာ ပျောက်ကင်းခဲ့သည်။ ဤအခါသမယအချို့တွင် frenulum ပုံပျက်သွားသည် သို့မဟုတ် တိုလာသည်။
frenulum တိုတောင်းတဲ့အတွက် အဆင်မပြေတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပထမအချက်မှာ လိင်ဆက်ဆံရန် ကြိုးပမ်းခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအတွက် အရေပြားကို ဆုတ်ခွာရန် ကြိုးစားခြင်း၊ နာကျင်စေလိမ့်မယ်။
ဤကြိုးပမ်းမှုအချို့တွင်၊ သင်ရောက်ရှိခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးစားနိုင်သည်။ မျက်ရည်တစ်စက်ဖြစ်ပေါ်ရန်ဒါကြောင့် sutured လုပ်ရမယ်။ တခြားကိစ္စတွေမှာ ကြိုးပမ်းမှုကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ လိင်တံက ကွေးနေတယ်။လိင်တံခေါင်းကို တစ်ဖက်သို့ကွေးပါ။
ကြိုးစားမှုတိုင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အဆုံးသတ်မှာတောင် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယားယံခြင်း နှင့် ယားယံခြင်း များသော နေရာ အဲဒီလို မကြိုးစားခင်၊
တိုတောင်းသော frenulum အတွက်ကုသမှု
အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ကုသမှုကတော့ ခွဲစိတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ ၎င်းသည် ကြီးကြီးမားမား ရှုပ်ထွေးမှုများ မရှိဘဲ လျင်မြန်ခြင်း၊ ရိုးရှင်းပြီး ကုသရန် လွယ်ကူသည်။ ပြီးပါမည်။ မေ့ဆေးအောက်မှာ ပြင်ပလူနာအဖြစ်၊ ဆေးရုံတက်စရာမလိုဘဲ။ Frenectomy သည် frenulum ဧရိယာရှိ ဦးရေပြားကို သေးငယ်သော ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် မှီခိုနေသော တစ်သျှူး သို့မဟုတ် အရေပြားတွင် တင်းမာမှုမရှိတော့အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ချုပ်ရိုးအနည်းငယ်ကို povidone အိုင်အိုဒင်း (ပိုးသတ်ဆေး) နှင့် အနာကျက်ခရင်မ်ဖြင့် ရောထားသော ၀တ်စုံများဖြင့် လိမ်းပေးပါမည်။ ပြဿနာအတွက် phimosis ခွဲစိတ်မှု မတူဘူး၊ အရေခွံပတ်လည်ရှိ အရေပြားအားလုံးကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားလိုက်သောကြောင့် ဂလက်များ၏ ဦးခေါင်းကို လုံးလုံးလျားလျား ပွင့်ထွက်စေပါသည်။
တိုတောင်းသော frenulum ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သော အမျိုးသားများ ရှိပါသည်။ အကြောဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အတူ။ ၎င်းတွင် အချို့သော တင်းမာမှုနှင့် ထပ်တလဲလဲဖြစ်မှုဖြင့် အရေပြားကို နောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ပြီးပါမည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် 4-5 ပတ်ကြာ နှင့် ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ထူထဲသောတစ်ရှူးများကို ပါးလွှာစေရန် ကော်တီကိုစတီရွိုက်အခြေခံ ခရင်မ်၏အကူအညီဖြင့်။ အကယ်၍ ဤကုသမှုသည် အလုပ်မဖြစ်ပါက ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သူ့ရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်က ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။
ဒါကြောင့် အိမ်မှာ နေ့စဉ် စောင့်ရှောက်မှု ဆက်တိုက်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ကုသခြင်းသည် မှန်ကန်သည်။. ကျနော်တို့ဖြစ်ပွားခြင်းမှရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဤအဘို့ထားရမည် နေ့စဉ်ကုသပေးပါမည်။ဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့် ဧရိယာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး povidone အိုင်အိုဒင်းကို နောက်ပိုင်းတွင် လိမ်းပေးပါ။ ပြီးနောက်၊ ၎င်းကို အဝတ်အစားများနှင့် သက်ဆိုင်သော ခရင်မ်များဖြင့် ထပ်မံ ဖုံးအုပ်ထားကာ ကောင်းမွန်သော အနာကျက်စေရန်နှင့် ပွတ်တိုက်မှု အမျိုးအစား ကင်းစင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကုသနေစဉ်အတွင်း လူကို အကြံပြုထားသည်။ စိုက်ထူခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်၊ ခဏတာ သက်သာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် နာကျင်လာနိုင်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို လေ့ကျင့်ရန် 15 ရက်ထက်ပို၍ စောင့်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အကောင်းဆုံးအားဖြင့် လေးပတ်အထိ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ငါ့မှာ frenulum အတိုရှိမရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။